Raha misafidy ity fomba fidirana ho mpitsidika tsotra ity ianao dia tsy hisy ahalala. Noho izany iagavina ianao mba tsy haka ny anarana famantaran'ny mpisera hafa mba tsy hisian'ny fifangaroana eo amin'ny fifanakalozana sy fifampizarana.
Inona no hamidinao, inona no hovidinao, aiza no misy anao (finday, mailaka, sns) ?
Ity no pejy ahafahanao miditra ato amin'ny fihaonana na resaka na sera. Safidio etsy ambony ny fomba hidiranao. Aza adino ny manamarina izay voasoratra.
Eto ampidirana anaty tsena, tranonkala hitika ianao, tsena izay hifaneraseranao amin'ny mpisera maro. Noho izany, ireto misy fitsipim-pitondrantena sy torolalana vitsivitsy tsara arahinao mba tsy ho sahirana na hiharan'ny loza amin'ny sera ianao:
1. Manaja ny hafa, aza manely teny na tsaho mety handratra na hampalahelo na hampidi-doza ireo mpifanerasera na mpisera hafa. Raha misy mpisera tsy mety aminao na manafintohana anao ny fitondrantenany dia resaho manokana amin'ny "private message" izy. Raha mbola tsy milamina ny raharaha dia ampandreneso ny mpiandraikitry ny tranonkala fa izy ireo no hanapaka ny hevitra farany,
2. Mba hialana amin'ny olana maro isan-karazany, fitsipika iray monja no harao: "Aza manolotra na manome vola mihintsy raha tsy efa eny an-tananao ny entana vidinao" (maro mantsy ireo mpisoloky mahay mandangolango amin'ny teny maharesy lahatra tokoa, koa mila mailo isika),
3. Ny mpivarotra no manantona ny mpividy (raha mifanao fotoana ny mpivarotra sy ny mpividy dia ny toerana mety sy akaikin'ny mpividy no vonjen'ny roa tonta, andrianina ny mpividy-mpanjifa) misy koa mantsy ireo mpivarotra tsy matotra tsy manana ny entana amidiny akory ka mametrapetraka,
4. Amin'ny maha sehatra misokatra sy maimaimpoana nefa kosa misy mpandrindra an'ity tsena amin'ny aterineto ity, ampafantarina ireo mampiasa azy fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fisolokina izay mety ahavoa ireo mpisera eto ireo tomponandraikitry ny tranonkala, nefa kosa manome toky fa hanao izay azon'izy ireo atao, araka ny fara heriny, ary ampiasa ny fomba sy fitaovana rehetra ampelatanany mba tsy hisian'izany,
5. Noho izany, mialohan'ny hifandraharahanao amin'ny mpisera iray dia fantaro tsara aloha ny momba azy io. Aza misalasala mangataka laharana finday na mailaka sns... ary mangataha fihaonana mivantana. Tsy misy ohatran'ny mihaona mivantana (nofo sy ra)!
Hamarananay azy, ireo mpiandraikitry ny tranonkala hitika tsena dia mirary fahombiazana sy fandraharahana mitondra vokatsoa ary anatin'ny fifanajana tanteraka ho an'ireo mpisera rehetra.
Raha sitrakao ny hametraka dokam-barotra eo amin'ny pejy voalohany dia manorata aty amin'ny mpandrindra ny tranonkala